CAJIIB: M/weyne Gaas xilalka maka qaadi doona Wasiiradda Amniga & Arrimaha gudaha Puntland oo waajibaadkoodii gudan-waayey? | Puntlandi.ca
Home Puntland CAJIIB: M/weyne Gaas xilalka maka qaadi doona Wasiiradda Amniga & Arrimaha gudaha Puntland oo waajibaadkoodii gudan-waayey?
CAJIIB: M/weyne Gaas xilalka maka qaadi doona Wasiiradda Amniga & Arrimaha gudaha Puntland oo waajibaadkoodii gudan-waayey?
Falanqeeyaasha iyo Shacabka Puntland ayaa ilgaar ah ku hayey dhacdooyinkii ilaa maanta ka dhacay Sohdimaha ay wadagaan Puntland iyo Somaliland, gaar ahaana deegaanka Tukaraq oo uu ka soo jeedo Wasiirka Arrimaha gudaha, Dawladdaha Hoose & Horumarinta Reer Miyiga dawladda Puntland Cabdullaahi Xirsi Timacadde, waxaana weerar kusoo qaaday Somaliland.
Wasiiradda Amniga & arrimaha gudaha ee Puntland ayaa maanta oo dagaal socday waxay iska xaadiriyeen madaarka diyaaradaha ee magaalada Garoowe, halkaas oo ay ka mid ahaayeen marti-sharaftii lagu casumay xafladda furitaanka madaarka Garoowe.
Halka Wasiirka Duulista Hawada & Garoomada Puntland Axmed Cilmi Karaash oo ay shaqadiisa ahayd furitaanka garoonkan, si deg deg ah saaka uga baxay gurigiisa markii uu soo gaaray warka la xariira dhacdadan.
Mr, Karaash ayaa caawa ku hoyana jiida dagaalka oo uu joogay maanta, isla markaasna isku duba ridaya howlgalka ay qorsheysay Puntland in ay dib ugu soo ceshato deegaanada ka maqan.
Halka wasiiradda Amniga Cabdullaahi Axmed Dowlad iyo Arrimaha Gudaha Mr, Timacadde ay kusugan yihiin guryahooda magaalada Garoowe, taas oo muujinaysa sidda loogu kala dheefoon yahay dhacdooyinka deg deg ah.
Axmed Karaash ayaa kal hore laga qaaday xilka Wasiirka Arrimaha gudaha, Dawladdaha Hoose & Horumarinta Reer miyiga, isagoo ka mid ahaa Wasiiradii ay codka kalsoonida ka kala laabteen golaha Wakiilada ee Puntland.
One Response to "CAJIIB: M/weyne Gaas xilalka maka qaadi doona Wasiiradda Amniga & Arrimaha gudaha Puntland oo waajibaadkoodii gudan-waayey?"
Gaas waa in isaga laga qaado xilka